Amacansi amahle kakhulu wezinja | Izinja Zomhlaba
Omata abanuka izinja wuhlobo lwamathoyizi oluwusizo kakhulu ezinjeni ezikhuthele kakhulu nokuthi, ngaphezu kokuhamba kwazo kwansuku zonke, zidinga umthamo owengeziwe wokuzivocavoca (nakuba kulokhu kuwumqondo) ukuze zehlise umoya.
Yingakho Namuhla sizokhuluma hhayi kuphela ngamacansi amahle kakhulu wezinja, kodwa nokuthi zisetshenziswa kanjani, yiziphi izinzuzo abanazo, ukuthi zithengwa kuphi nokunye okuningi. Futhi, uma ufuna okwengeziwe, sincoma lesi sihloko esihlobene mayelana abondli bezinja: sikutshela konke.
I-TOPSEAS Snuffle Mat ye ...
I-AWOOF Olfactory Carpet ...
I-Sunlight smile Rug...
I-Tonsooze Snuffle Mat ye ...
I-MULEVIP Snuffle Mat ye...
I-McNory Snuffle Mat ye ...
1 Umata ongcono kakhulu wokuhogela wezinja
1.1 Umata wokuqeqesha we-olfactory
1.2 I-soft mat enokuhlolwa okuhlukahlukene
1.3 Umata othambile ukuze uphumule
1.4 Umata wokuhogela ogoqekayo
1.5 Ukhaphethi wezinja ezinkulu
1.6 Umata ophenduka indishi
1.7 Umata omise okwezimbali
2 Ayini omati bephunga?
3 Yiziphi izinzuzo zamata anephunga?
3.1 Umsebenzi wokupholisa amacansi amaphunga
4 Amathiphu okusetshenziswa kwamacansi okunuka
5 Ungathenga kuphi amacansi ezinja
Umata ongcono kakhulu wokuhogela wezinja
Umata wokuqeqesha we-olfactory
I-IEUMLER Snuffle Mat ye ...
Phakathi kwamaragi anuka kamnandi ezinja atholakala e-Amazon, lena igqamile, cishe amasentimitha angama-45 ohlangothini ngalunye futhi itholakala ngemibala eminingana emihle kakhulu. Umklamo ulula kakhulu kodwa awusebenzi kangako: uchungechunge lwezindwangu ezinamathiselwe kusisekelo sepulasitiki esinezimbobo, lapho imiklomelo ingafihlwa khona. Ukuthinta kwendwangu ithambile futhi imelana futhi, ngenxa yobukhulu bayo, ilungele izinja ezincane noma eziphakathi.
Lo mgqigqo uwufeza ngokugcwele umsebenzi wawo, njengoba kufanele kuphela uqondise ikhala lenja yakho ukuze uthole imiklomelo futhi ubambe ukusebenza komdlalo, okuyilungele ukuba iyeke ukudla ngokushesha.
I-soft mat enokuhlolwa okuhlukahlukene
I-FREESOO Snuffle Mat ye ...
Idizayini ethe ukuhluka kwamanye amaragi anukayo yileyo yalo modeli, okuhlanganisa isisekelo esithambile kanye nokuhlolwa okuningana lapho ungafihla khona imiklomelo: amaphakethe, imikhono, izindandatho zendwangu ngisho nohlobo lwembali kuzoqinisekisa ukuthi inja yakho ayitholi isithukuthezi ngalo mkhiqizo.. Indwangu ifana ne-flannel, ngakho-ke ithambile kakhulu, ngaphandle kwesisekelo, esingasheleli. Ngaphezu kwalokho, ingawashwa ngomshini. Ekugcineni, ngenxa yezilinganiso zayo (36,5 cm ohlangothini olude kakhulu) kunconywa ukuyisebenzisa ikakhulukazi nezinja ezincane.
Umata othambile ukuze uphumule
I-Vehipa Snuffle Mat ye ...
Le mat anti-stress, efana kakhulu neyangaphambilini, ilungele inja yakho ukuthi ikhululeke, ikakhulukazi uma imatasa kakhulu. Iqukethe izindawo ezahlukene lapho singafihla khona imiklomelo (amasongo, amaphakethe, uhlobo lwemikhono, ama-ruffles kanye neyindilinga eyenziwe ngemicu yendwangu) futhi sivumele isilwane sethu sithole iphunga eliningi. Lokhu kuzivocavoca kwengqondo kuzokushiya ukhathele futhi ujabule futhi ngaphezu kwalokho, ngokusekelwe ekuzivivinyeni komvuzo womzamo, kusebenza kahle kakhulu ezinja ezinokucindezeleka.
Umata wokuhogela ogoqekayo
Kulabo abafuna umkhiqizo, ngaphezu kokuphumelela, muhle, bazothola inketho enhle kulo mbhoxo omuhle. Ifakwe njengembali, nakuba, ngaphezu kwemichilo yendwangu, singathola nezinye izindawo ezincane zokufihla imiklomelo, njengezindandatho zendwangu, i-butterfly enezingqimba eziningana noma uhlobo lwamadombolo. Ngaphezu kwalokho, iyagoqeka, ngakho-ke uma usuqedile ukuyisebenzisa ungayibuyisela kalula.
Ukhaphethi wezinja ezinkulu
Le mat ene-50 cm engxenyeni yayo ende ilungele izinja ezinkulu, ngaphezu kwalokho, isebenza ngendlela ehlukile kule esesiyibonile kuze kube manje. Iqukethe uchungechunge lwezinwele, ezifana nalezo zokugeza, eziwugqinsi futhi ezingaba ngu-2 cm, lapho singafihla khona imiklomelo. Lo mkhiqizo uhlanganisa isikhwama sokugcina, Ingafakwa emshinini wokuwasha futhi ihlanganisa izinkomishi zokumunca ukuze inganyakazi, nakuba eminye imibono iqokomisa ukuthi azisebenzi kahle kakhulu.
Umata ophenduka indishi
Lo mgqigqo othakazelisayo unemisebenzi emibili: Okokuqala nje, kusebenza njengamacansi okunuka izinja esikade sikubona, okungukuthi, imiklomelo ifihliwe phakathi kwemichilo yezingubo ukuze isilwane sethu siyithole. Ngakolunye uhlangothi, ngokusebenzisa indlela elula amachopho ocansi ayakhuphuka abe isitsha esiwusizo kakhulu ekuqeqesheni inja yakho ukuba idle kancane.
Umata omise okwezimbali
Futhi sigcina sesinombhede onuka kamnandi inja ekwazi ukuhogela ngawo njengoba ifuna imiklomelo yayo. Isikhungo siyindawo yokusesha eyinhloko futhi simise okwembali eyenziwe ngemicu yendwangu, nakuba ikhona eminye imidlalo ezungezile. Ngaphezu kwalokho, iyagoqeka, ukuze ukwazi ukuyigcina ngokuphazima kweso. Indwangu ithambile futhi iqinile futhi iyawasheka ngomshini. Ekugcineni, umata uhlanganisa izintambo ezimbalwa ukuze ukwazi ukuwubopha ifenisha futhi ungaphenduki.
Ayini omati bephunga?
Amacansi ezinja awuhlobo lwethoyizi oluvumela isilwane sakho ukuthi sisebenzise ingqondo yaso, khululeka futhi, phezu kwakho, uthole ubumnandi.
Isisekelo sokusebenza kwalezi zinto silula kakhulu: Ngokuvamile zihlanganisa uhlobo lukakhaphethi onemicu yendwangu exekethile enamathiselwe kusisekelo sepulasitiki esivumela inja ukuba ihogele. ekufuneni imiklomelo ebifihlwe kuyo ngaphambilini. Njengoba ubona, ukusebenza kufana ncamashi nokwepulasitiki okufihlwe kuyo imiklomelo futhi lapho inja kufanele icabange khona ukuze ikuthole.
Ngamafuphi, izinja zihumusha kanjani indawo ezizungezile ngephunga (okunamandla acishe abe yizinkulungwane eziyikhulu kunabantu), umata onjalo uhlale uwumqondo omuhle.
Yiziphi izinzuzo zamata anephunga?
Njenganoma yiliphi ithoyizi, amacansi amaphunga ezinja anenani lezinzuzo ezizosiza ukwenza inja yakho ijabule futhi lokho, ngokuvamile, kuyoba yinzuzo kakhulu empilweni yakho, isibonelo:
Okokuqala, vumela inja ukuthi isebenzise ingqondo ngaphandle kokudinga izikhala ezinkulu.
Iqiniso lokusebenzisa ingqondo ngokwayo kakade linezinzuzo eziningana, isibonelo, a impilo engcono, ukunciphisa ukucindezeleka, ukuphumula ngenja nokuvimbela isithukuthezi.
Ngalokho, umsebenzi wokuhogela umnandi kakhulu okwezinja.
Ekugcineni, umata onjalo isiza inja ukuthi idle kancane, kwazise kumele abheke ukudla kwakhe ngaphambi kokukuqoba.
Umsebenzi wokupholisa amacansi amaphunga
Sizibonile izinzuzo zamacansi ezinja, nakuba kufanelekile ukuhlala kwenye yezinzuzo zayo eziyinhloko: umsebenzi wokupholisa lawa mathoyizi.
Ngokuvamile (njengoba kufanele wazi, kukhona izinja zayo yonke into) umsebenzi oyinhloko we-mat ukuhlinzeka ngokuzivocavoca kwengqondo esilwaneni sakho, okuthi, ukuphindaphinda, kusize ukuthulisa. Ngakho-ke, umata uzoshukumisa iphunga lenja yakho, okuthi ngemva kokujabulela ukukhuthazwa isikhathi eside njengoba kuthatha (nokuthola imivuzo ehlukahlukene) izozizwa ikhululekile, icindezelekile kancane futhi ijabule.
Konke lokhu ayisizi nje inja ukuthi izizwe ingcono ngayo kanye nomhlaba oyizungezile (Kumayelana nokusebenzisa umvuzo womzamo wakudala), kodwa futhi kusiza ukugwema ukuziphatha okulimazayo, okufana nokuluma nokunwaya ifenisha noma amaragi abantu. Le mikhiqizo ingaba usizo kakhulu ezinjeni ezingasebenzi kahle, ezidinga okungaphezu kohambo lwazo lwansuku zonke ukuze zisebenzise amandla azo.
Amathiphu okusetshenziswa kwamacansi okunuka
Ngemuva kwalokho Sizokunikeza amathiphu angase abe usizo kuweIkakhulukazi uma kungokokuqala ngqa usebenzisa enye yalawa mathoyizi:
Nakuba umkhiqizo ngamunye uwumhlaba, amaragi amaningi e-doggie awasheka ngomshini ohlelweni oluthambile, bese womile noma wome emoyeni. Nyakazisa kuqala ukuze ususe noma yimiphi imiklomelo esele nemvuthuluka. Futhi, bheka ilebula yomkhiqizo ukuze uqiniseke ukuthi kufanele ugcinwe kanjani.
Ungalokothi uvumele inja yakho ukuthi isebenzise umata ngaphandle kokugadwa nguwenjengoba ungazilimaza noma ugwinye ingxenye encane noma ecwiyiwe.
Zisuse emehlweni abo uma zingazisebenzisi. Ngale ndlela bazoyihlanganisa nesenzakalo esikhethekile futhi bayoba nesifiso esengeziwe sokudlala.
Ungabeka imiklomelo, kodwa nezinye izakhi owaziyo ukuthi zizomfanela (njengamakhambi). Qiniseka ukuthi awanabo ubuthi.
Ungathenga kuphi amacansi ezinja
Kunezindawo eziningi, ezinye ezingalindelekile kakhulu, lapho ungathola amacansi amaphunga ezinja. Isibonelo:
En Amazon uzothola amamodeli amaningi ahlukene, ngalinye linombala walo, umsebenzi nezici. Uma unenkontileka umsebenzi wabo oyinhloko, ngaphezu kwalokho, bawuletha ekhaya lakho ngokushesha.
En izitolo ezikhethekile njenge-Zooplus noma i-TiendaAnimal nabo banezinketho ezithakazelisa kakhulu. Okuhle ngalezi zinketho ukuthi ungaya esitolo mathupha ukuze ubone ukuthi usayizi, impahla injani ... futhi ubuze ngisho nabasizi bezitolo ukuthi iyiphi inketho ekulungele wena nesilwane sakho.
Okokugcina, ku amawebhu ezinto ezenziwe ngezandlaNjengo-Etsy, uzothola ithoni yezinketho ezahlukene. Kwezinye izimo zenziwe ngendlela oyifisayo ngokugcwele, ngakho-ke ungakhetha imibala, izinto ezibonakalayo noma umumo owuthanda kakhulu.
Amacansi ezinja ayithoyizi elenza izimanga ukuze sizolise futhi siqeqeshe inja yethu ngokwengqondo. Sitshele, ingabe uke wazama noma yiliphi kulawa marabhu? Isebenzile? Ingabe unawo amaqhinga lapho uwasebenzisa?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Amacansi amahle kakhulu wezinja
Amaragi okupholisa angcono kakhulu ezinja